VfxAlert signalada iyo qaababka laambadda | vfxAlert official blog
VfxAlert signalada iyo qaababka laambadda
Dhamaan sida loo sameeyo xeeladaha ikhtiyaariyada ikhtiyaariga ah waa inay tixgeliyaan dhammaan xulashooyinka falanqaynta suuqa. Go'aan kama gaari kartid kaliya hal qalab, xitaa haddii kuwani yihiin qaababka falanqaynta laambadda.
Aynu ku bilowno calaamadaha isbeddelka, eeg tusaalooyinka calaamadaha binary vfxAlert.
Labada lacagood ee GBP / USD iyo calaamado adag oo ku saabsan calaamadda PUT-option. Aynu eegno jaantuska qiimaha - xaqiijinta qaabka "laambadda seddexaad" waxaadna furan kartaa ikhtiyaar leh dhicitaankiisa 5-10 daqiiqo.
Calaamaddu waxay ka muuqatay isgoyska celceliska dhaqdhaqaaqa ("MA" ee boodhka calaamadaha). Ganacsatadu way arkaan tan. Ikhtiyaarku wuxuu ku furmayaa dib u noqosho, laakiin markaa sidoo kale waxaa jira qaabab shumaca, iyo calaamado cusub oo PUT leh calaamadda "MA" ayaa ku furaya xulashooyinka soo socda mug weyn.
Calaamadda xigta ee tilmaame CCI ah waxay muujineysaa dhaqdhaqaaqa isbeddellada hadda socda. Waxaa loo sameeyay suuqa saamiyada, halkaas oo isbeddelladoodu dheer yihiin oo sahlan tahay in la helo. On Forex, isbeddelku wuu ka sarreeyaa waxaana jiri kara sixitaanno xoog leh iyo dib u soo laabasho "jajabinaya" tilmaame. Jaantuska, ikhtiyaarrada ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah ee ikhtiyaariga ah ayaa lagu xaqiijiyay qaab shumac adag - qiimaha ayaa ku wajahan farqiga waxaadna furi kartaa xulashada CALL.
Kala-beddelka ikhtiyaarrada ikhtiyaariga ah ee dhabta ah ayaa tilmaamaya vfxAlert.
Ka kalsooni badan kuwa casriga ah, kuwa bilowga ah waa inay ku bilaabaan iyaga. Way fududahay in la arko oo la fahmo: "Bulling engulfing" pattern, taas oo macnaheedu yahay "dibida" waxay ku guuleysteen inay isu dheelitirka isku dheelitirka awooda naftooda oo ay bilaabaan kor u kaca EUR / GBP. Calaamadda vfxAlert waxay tan ku xaqiijineysaa tan falanqaynta farsamada ee tilmaame RSI.
Shumaca Doji wuxuu ka muuqday EUR / USD. Falanqaynta laambadda, tani waa qaabka ugu xoogan ee dib u noqoshada. VfxAlert ikhtiyaar ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ah sida ku xusan isbedelka 'Parabolic SAR' wuxuu xaqiijinayaa bilowga hoos u dhaca. Hal shamac ka dib, isbeddelku wuxuu bilaabmay waxaad furi kartaa FURTA-xulashada.
Ganacsaduhu wuxuu fiiriyaa qiimaha «Awood» marka hore, suuqu wuxuu noqon karaa dhinac, qaababka laambadduna waa been:
Waxaan marwalba bilownaa tijaabinta iskudhafka "vfxAlert calaamadaha binary live + qaababka laambadda" koontada demo. Waxaad kaliya heleysaa talooyin waana inaad hubisaa inay ku habboon yihiin istiraatiijiyaddaada, kalfadhiga ganacsiga iyo qaabka ganacsiga.